Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1403
Par Taratra sur 09/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Nandefa fanambarana ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa nitohy hatramin’ny maraina teo ny orambe amin’ny faritra maromaro. Tafiditra ao ny manodidina an’Antananarivo, Andilamena, ny faritra Atsimo Andrefana ary Mangoro. Nahazo fampitandremana miloko mena, manambara loza mihatra ireo toerana voalaza ireo. Samy niara-nahita ny rehetra fa mafimafy ny orana nirotsaka omaly teto an-dRenivohitra raha […]
Fivaza : nankalaza ny andron’ny vehivavy
Par Taratra sur 09/03/2016 Divers, NS Malagasy
Toy ny fanao isan-taona, nankalaza ny andron’ny vehivavy ny Fivaza (Fikambanan’ny vadina zandary), omaly teny amin’ny Toby Ratsimandrava. Nahitana ny Fivaza nasionaly sy ny Fivaza manerana ny Nosy. Fotoam-pivavahana no nentina nanombohana ny fotoana izay notarihin’ny mpitarika fivavahana eo anivon’ny Foloalindahy malagasy. Nisy ny toromarika nomen’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Paza Didier ny […]
Beriziky Jean-Omer : “Tsara ilazana ny zava-misy marina ny vahoaka”
Par Taratra sur 09/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
“Tsara ilazana ny zava-misy marina ny vahoaka, mangetaheta fahamarinana amin’ny raharaha politika. Avy amin’ny vahoaka ny fahefan’ny mpitondra. Tokony hohajaina entina hanasoavana azy izany. Tsy ampy izany eto amintsika, ka lasa tsaho ny ahiahy izay miteraka savorovoro.” Fanehoan-kevitry ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer, teny Ambodirotra, omaly, io. Adidin’ny mpitondra ny manazava ny saim-bahoaka, ny […]
Ny ety ambany tahaka ny any ambony…
Par Taratra sur 09/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa mahazatra ny mahita olona malotoloto mivalandotra amoron-dalana. Tsy fantatra na reraka, na noana, na mamo, na marary, na maty. Zara raha mijery ny mpandalo? Tahaka ny efa mahazatra ny tsy firaharahan’ny tomponandraikitra, isan-tsehatra na isan’ambaratonga, olona hoe tsy hita popoka na matimaty foana, raha tsy hoe teratany vahiny, na mahabe resaka amin’ny haino aman-jery. […]
Par Taratra sur 09/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy hafa fa mpiray tsikombakomba sady naman’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana, maty voatifitry ny polisy teny Talatamaty, farany teo, izy fito mianadahy tratran’ny vela-pandriky ny polisin’ny BC ireto. Basy sy bala marobe no tratra teny amin’izy ireo. Miralenta tokoa e ! Ravan’ny polisy indray ny tambajotran-jiolahy eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Olona fito mianadahy voasambotry ny […]
Kitra – «Ligue des champions 2016» : hanamafy ny tapakilany ny Real de Madrid
Par Taratra sur 08/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Ho fantatra, amin’ity anio ity, izay ekipa voalohany hiakatra eo amin’ny ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’ireo hiady izany ny Real de Madrid. Hotanterahina, amin’ity talata ity, ny lalao ampahavalon-dalana miverina, amin’ny “Ligue des champions d’Europe 2016”, taranja baolina kitra. Hiady ary hanamafy ny tapakila hiakarany […]
Tenisy – «Afrique Junior» : mpilalao 7 mianadahy hiaro ny voninahi-pirenena
Hanomboka rahampitso alarobia 9 marsa, any Pretoria, Afrika Atsimo, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy zandriny, U14 sy U16 vavy sy lahy. Efa any an-toerana ireo delegasiona malagasy, izay ahitana mpilalao 7 mianadahy. Roa eo amin’ny sokajy U14, Andriamadison Finaritra sy Razafindrakoto Mioty. Radilofe Sariaka, miampy an’i Tsantaniony Iariniaina, ny eo amin’ny U16 vehivavy. […]
«Ligue des champions» : hampiharina amin’ny famaranana ny «Goal-line»
Hampiharina voalohany eo amin’ny fifaninanana amin’ny baolina kitra ny teknolojia vaovao, “Goal-line”. Ny famaranana amin’ny “Ligue des champions” sy ny “Ligue Europa”, no hanaovana izany, amin’ity. Nambaran’ny fivondronan’ny federasiona eoropeanina amin’ny baolina kitra «UEFA», ny zoma lasa teo, fa ampiasaina amin’izay ny “Goal-line”. Ilay karazana «caméra», apetraka ao anaty tsatoby, manamarina ny fidiran’ny baolina na […]
Havia sy Havanana : mikajy, mikaroka, mankato ny soatoavina malagasy
Par Taratra sur 08/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
« Tsy mahalala fomba intsony isika », hoy ny fanazavan-dRamaroson Misa, mpanorina ny Havia sy Havanana. Anisan’ny antony iray nananganana ity fikambanana mikajy sy mikaroka ary mankato ny soatoavina malagasy ity tamin’ny taona 2010 izany. Very ilay fahalalana nomen’Andriamanitra ny Malagasy. « Nanjary nafangaro sy nifangaro tamin’ny Malagasy ny fahalalana sy ny finoana. Ataon’ny sasany mangirifiry ny vatana […]
Ampela manao kilalaky : hiverina i Sylange la Reine
Raha toa ka ny lehilahy hatrany no nivoy ny gadona kilalaky tamin’ny voalohany, anisan’ny nanova izay fijery izay kosa ry Sylange. Avy hatrany dia nambabo ny fon’ny mpankafy ny nahita ireo « ampela manao kilalaky », ka niaka-daza vetivety ny tarika. Nisy ny fotoana nanginana kely, saingy niketrika mozika no nataon’i Sylange la Reine sy ny tariny […]
CUA : miara-mientana amin’ny fanadiovana ny vehivavy
Par Taratra sur 08/03/2016 Divers, NS Malagasy
Efa nisokatra ny faran’ny herinandro teo nanoloana ny lapan’ny Tanàna Analakely ny fankalazana ny Andron’ny vehivavy, nokarakarain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, eo ambany fifehezan’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao. Misy ny varotra fampirantiana karazan’entana maro haranty amin’ny tranoheva 20 mahery. Misy fitsaboana maimaimpoana hataon’ny BMH. Eo koa ny fandrindram-piterahana, ny fitiliana katarakta sy ny fitiliana diabeta ary […]
Asa soratra : hadika teny malagasy ny bokin’i Jean Bofane
Tonga eto amintsika, omaly, ilay mpanoratra frankofona, teratany kongole, In Koli Jean Bofane, nandrombaka ny « Prix des cinq continents », fifaninanana fanoratana tantara, karakarain’ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny frankofonia (OIF). Vy nahitana izany ny fikambanan’ny trano fanontana boky AEdim. Nisongadina tamin’ny fihaonana tamin’i Jean Bofane, omaly teny amin’ny Cite Ambatonakanga, ny hoe anisan’ny porofon’ny fisokafan’ny AEdim […]
Par Taratra sur 08/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Lakalaka ny fiainana, efa natao ho isan’ny tsy velona intsony fa nariana teny amin’ny Nosy Komba i Nazira. Tsy izay anefa ny fandaharana fa toy ny ankizy rehetra, manana ny tanjony ity ankizivavy ity ankehitriny. Vao telo taona monja i Nazira no narian’ny reniny tany amin’ny Nosy Komba. Nonina tao Nosy be Helle Ville […]
Toetry ny andro : ho avy ny orana mandritra ny herinandro
Ho avy ny orana amin’ity herinandro ity fa ho maivana kosa ny refiny, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Halefaka ny orana saika manerana ny Nosy, indrindra ny tolakandro sy ny alina. Hanorana malefaka miatoato hatrany any Analanjirofo sy Antalaha. Tombanana ho maina kosa ny andro amin’ny faritra maro ny faran’ny […]
Jirama : manafintohina ny mpanjifa ny fahatapahan-jiro matetika
Tsy vao izao! Nilaza hatry ny ela ny fanjakana fa tsy misy intsony ny delestazy toy ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, ohatra. Lazaina koa fa hafa ny delestazy, fanapahana noho ny tsy fahampian’ny tanjaka, sy ny fanapahana ara-teknika, noho ny lafiny toetr’andro, ohatra. Nahatsirakitra, anefa ny mpanjifa fa na tsara na ratsy ny toetr’andro, […]
Foibe « Ny Fivoarantsika » : ofanina ho matihanina ny tantsaha tanora
Par Taratra sur 08/03/2016 Economie, NS Malagasy
Atoa Rakotomanga Samoelina, talen’ny foibe fampiofanana « Ny Fivoarantsika », Anjepy Manjakandriana, manofana tanora ho matihanina amin’ny fambolena sy fiompiana. Fanazavana nomeny, araka ny tanjona nofaritan’ny « Réseau Soa ». *Gazety Taratra : Foibe fampiofanana « Ny Fivoarantsika », nanomboka oviana ary ahoana ny fomba nananganana azy ? -Rakotomanga Samoelina : Tsara marihina aloha fa niainga manokana avy amin’ny hetaheta sy herimpon’ny tantsaha […]
Fiaraha-miasa Frantsa sy Madagasikara : 880.000 euros ny fanadihadiana ho an’ny tetikasa 2017-2018
Mialoha ny hanatanterahana ny asa samihafa, tsy maintsy atao ny fanadihadiana lalim-paka. Misandrahaka amin’ny sehatra maro ny tohana ataon’ny Fiaraha-miasa frantsay (AFD), an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra. Natao sonia, omaly tao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, ny fanampiana avy amin’ny AFD (Agence française de développement), 880.000 euros (2.720.000.000 miliara Ar). Niara-nanao sonia izany ny ambasadaoro frantsay, […]
Manjakandriana : seha-pihariana iray lehibe ny tantely
Seha-pihariana iray lehibe any ambanivohitra ny fiompiana tantely, manerana ny faritra maro eto Madagasikara, afovoan-tany sy any morontsiraka. Ankoatra ny fanofanana tanora hiditra amin’izany sehatra izany, miady mafy amin’ny aretina varroise manimba io fiompiana io ny federasiona mpiompy tantely, faritra Analamanga, miaraka amin’ny « Réseau Soa ». Manjakandriana, kaominina iray eto amin’ny faritra Analamanga, ahitana mpiompy tantely […]
« Réseau Soa » manohana ny tanora : ampiana handrafitra tetikasa any ambanivohitra ny tanora
Nijoro eto Madagasikara ny « Réseau Soa » (1), nanomboka ny taona 2003. Ahitana sendika 19 mandrafitra azy manerana ny Nosy, miasa ho amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny tantsaha, eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Miara-miasa ihany koa amin’ireo minisitera telo : Fambolena, Fiompiana, Jono. Fanadihadiana. Tsy takona afenina, tratra aoriana ny fampandrosoana ny any ambanivohitra eto […]
An-kitsim-po : heverin’ny sasany “ho an’izay tsy tafita”
Tsy mahasarika firy ny tanora malagasy ny mandalim-pahaizana ho matihanina eo amin’ny sehatry ny fiompiana sy fambolena. Tsy omen-tsiny loatra ny amin’izany izy ireo, satria hatramin’izay, karazany tsy misy ny fandresen-dahatra miantso azy ireo hitrandraka izany sehatra izany. Ny fiompiana sy fambolena ambara hatry ny ela fa antoky ny fampandrosoana anefa, toa heverin’ny sasany fa […]
PM Ravelonarivo : « Hajoro ny andrimpanjakana hafa »
Par Taratra sur 08/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
« Efa mametraka ny andrimpanjakana voalazan’ny lalàmpanorenana ny fitondrana. Dingana lehibe izany, mba hampandehanana ny asa. Tsy nangataka fotoana lava isika. Teo ny nametrahana ben’ny Tanàna. Taorian’izany ny loholona », hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, omaly teny Mahazoarivo. Nambarany fa porofon’ny fahavononan’ny filoham-pirenena sy ny governemanta ny fametrahana izany ary tsy ho ela ireo sisa tsy mbola […]
Fiainana antoko : hiala tsy ho Tim, Rakotoarivelo Mamy
Tonga amin’ny tsontsori-mamba isarahana ihany ? « Nisy disadisa teo amin’ny tenako sy ny filoha Ravalomanana na nanaraka azy hatramin’ny farany aza aho… Tsy mifanaraka intsony amin’ny etika politikako sy etika ara-moraly hatramin’ny nidirako ho Tim hatramin’ny taona 2002, ity antoko ity… Koa mba tsy ho tonga amin’ny hoe nesorina Rakotoarivelo, naleoko miala raha izao fomba fitondrana […]
Fivoriana iraisam-pirenena : ho avy hanombana ny fanomanana ny OIF i Michaëlle Jean
Antomotra ny fotoana ? Ho avy eto amintsika mialoha ny faran’ity volana marsa ity ny sekretera jeneralin’ny Frankofonia, Michaëlle Jean. Anisan’ny anton-diany eto ny hijery ny fanomanana sy ny fikarakarana ny handraisantsika ny fihaonana an-tampon’ny OIF. Nandray ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, tao Paris omaly, ny sekretera jeneralin’ny Frankofonia (OIF), Michaëlle Jean. Nivoitra tamin’izany […]
Vonoan’olona teny Ambohidratrimo : olona telo voasambotry ny zandary
Tratran’ny zandary ireo olona telo voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ilay famonoana lehilahy iray 24 taona teny Ambohidratrimo, ny 24 febroary 2016 lasa teo. Tsatoka antsy inefatra no nahafaty ilay niharam-boina. Tsy vitan’izay fa mbola nodorana tamin’ny lasantsy ihany koa ny fatiny taorian’izay. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Emmo/Reg ny Kly Ravoavy, tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka no […]
Notsaboina ary efa nody ny minisitra Mahafaly
Narary mafy noho ny aretim-bavony nahazo azy ary niteraka fandoavana ra ny minisitry ny Atitany, Mahafaly Solonandrasana, omaly. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy tao amin’ny HJRA Ampefiloha anefa ny tenany ka nalefa nody eny an-tokantranony, eny Ivato. Midika izany fa tsy marina ny feo niely amin’ny hoe nalefa notsaboina haingana atsy amin’ny Nosy Maorisy […]
« Précédent 1 … 1 401 1 402 1 403 1 404 1 405 … 1 464 Suivant »